Qabxii hubannoo dhimma hiriira har’a Waxabajji 3,2019 dhoofame irratti – Kichuu
Qabxii hubannoo dhimma hiriira har’a Waxabajji 3,2019 dhoofame irratti
“Nuti barattoonni Oromoo saba keenya Oromoof baranne. Oromoon alatti abdiis gammachuus hinqabnu. Kanaaf miidhamni saba keenyaa nutti dhagaa’ama. Miidhamni Oromoo nu dhukkubsa” jedhu barattoonni Yuunibarsiitii Oromiyaa keessa.
Hiriirri mormii barattoota Yuunibarsiitii Mattuu fi barattoota Yuunibarsiiti Amboon dhohee jira. Kaayyoon hiriira hayyoota barattoota Oromoo qaroowwan sabaa kanaan bahamee gocha fokkisaa maqaa sakattaa WBO dhahatee Oromoo irratti raawwataa jiru kan balaaleffatudha. Akkasuma barattoonni Yuunibarsiitiilee kunneen waraana mootummaa nama ajjeesaa, nama hidhaa fi nama dararaa tureef jiru irraa abdii dirree dimokiraasii bal’isee waraana uummataa nuuf ta’a waraanni mootummaa jedhu hinqabnu jechuurraa, waraanni uummataaf dhaabbatu WBO ta’uutti amanna kanaaf shira WBO balleessuuf koreen teknikaa fi mootummaan wal ta’anii shiraa jiran nii balaaleffanna dhaadannoo jedhu of keessaa qaba.
Kunis maqaa koree Teknikaa dhahachuun miseensa nama 71 qabna jechaa murtii namni lama uummata Oromoo miliyoona 50 ol utuu hinmariisisin dabarse kan Oromoo bakka bu’u miti. Sochii WBO diiguuf godhamu irratti firaafiis diinaafis gara laafina hinqabnu ejjennoo jedhu qabu. Kun ammoo nageenya gaanfa Afrikaa keessaa yaaddeessaa ta’ee yeroo jirutti addatti uummata guddaa gaanfa Afrikaa Kuushiif haalli itti adeemaa jiru sodaachisaaf waraana isa tiksu waan barbaachisuuf waraanni WBO nagaaf dimokiraasii biyyattiii dhugoomsuuf gahumsas dandeettiis muxannoos kan waggaa dheeraa qabaachuu isaa biratti waraana aantummaa sabaa qabudha jechuurraa akeeka WBO dhabamsiisuu taasifamu balaaleffachuu ture.
Kanumaan wal qabatee addatti wanti barattoonni Yuunibarsiitii egeereef abdatamoon Oromiyaa yaaddoo itti naquun hiriiraaf akka bahan taasise gochaa mootummaan daguuggaa sanyii raawwachuuf dhukaasa summaa’aa qabatee lafa WBO’n jirutti sochii taasisaa jiru egeree hormaata uummata Oromoo naannoo summiin raayyaa itttisa biyyaan biifamee yaaddeessaa fi hanga ammaa waan qoratame dhabuurraa qaama hir’uu dhalachuuf dirqamuu mala uummatni naannoon summii itti biifame kanaa jechuudhaan yakka balaaleffatamuu qabu kana ofitti fudhatanii balaaleffatan.
Yakki barattoonni Yuunibarsiitii Oromiyaa mootummaa ittiin balaaleffatan kan amma raawwataa jiru kan ijaan argaa jiraniif maatii isaaniirraa gurraan dhagaa’aa jiranidha. Eenyuun olitti saba keenyaaf dhaabbachuuf baranne waan sabni keenya hinargin arguuf baranne kanaafis Oromoon nu abdata jechuurraa guutuu Oromiyaa keessatti labsii karaa nagaan mootummaan akka yakka raawwataa jiru dhaabuuf gaafachuuf hiriirri kun qindaa’e.
Hiriirri har’aa yoom dhaabbata? Oromoo mara bira nii gahaa?
Hiriirri har’a Waxabajji 3,2019 dhohe kun hanga galii qabsoo Oromoo galma bilisummaa sharafaan utuu hintaanee guutuu guutuutti argamsiisutti itti fufa. Hiriirri Qeerroo Bilisummaa dhoose hanga gaaffiin Oromoo barootaaf gaafatamaa ture deebii argatutti kan itti fufu ta’a. kunis guutummaa hawwaasa Oromoo alaaf keessa jiru mara bira gahuun Oromoon marti gaaffii dimokiraasiin nuuf ayyamu kana itti makamee akka gaafatuuf dhaamsa uummata keenyaaf dabarsaa jirra jedhu. Dhukaasa Summaa’aa yeroo yeroon mootummaan uummatatti lakkisaa jiru hormaata Oromoo egereef yaaddoo olaanaa ta’uu beekee Oromoon marti balaleffachuu qabas jedhu.
Hiriiricha danquuf sochiin nii taasifamaa?
Impaayeera Xoophiyaa keessatti gaaffiin haqaa ati gaafattu dabee deebii argata. Karaa gaafatteen dhiifamee karaa humnaan si dhabamsiisuu waan gaaffii gaafatteef si ajjeesuutti jarjartiin abbala sirni EPRDF. Kanaaf hiriira kana danquuf caasaan mootummaa gaaffii barattootaa kana maqaa balleessuuf sochii taasisuu malu. Keessattuu hiriirri kun akka waan gatidhabeessa ta’eetti miidiiyaa qaban gargaaramanii uummata afaanfajjeessuu malu. Kanaaf falli: Oromoof eenyuun olitti WBO tti aanee qaamni dhukkubsatu barataa Yuunibarsiitii ta’uu beektanii maqa balleessii hiriira kana danquuf oofamuuf utuu bakka hinlaatiin gaaffii barattoonni gaafatan kana deebii akka argatuuf gahee akka Oromummaatti nurraa eegamu bahachuun fardiidha. Akeeka Mootummaan tokkummaa Oromoo diiguuf kutaan qoodee Kibba Oromiyaa fi Lixa Oromiyaa haala suukanneessaan dararaa jiru balaaleffachuun dirqama dhalootaaf dirqama Oromoo maraati. Tokkummaa dhiigaan argame diiguuf qaamota warraaqan mara dura dhaabachuudhaan tokkummaan qabsoofnee galii qabsichaa Bilisummaa waaraa akka argannuuf gaaffiin gaafannu itti fufa